Inde - Madagasikara : Mihamafy ny fiaraha-miasa -
AccueilRaharaham-pirenenaInde – Madagasikara : Mihamafy ny fiaraha-miasa
Nigadona teto Madagasikara omaly, ny Filohan’ny Repoblikan’i Inde, Ram Nath Kovind, sy ny vadiny, Savita Kovind, miaraka amin’ny delegasiona mafonja ahitana ny minisi-panjakana indianina misahana ny Fahasalamana, Ashwini Kumar Choubey, sy ireo parlemantera miisa efatra ary ireo olom-panjakana ambony eo anivon’ny governemanta indianina. Sambany ity Filoha indianina ity no nitsidika an’i Madagasikara.
Araka izany, omaly ihany, avy hatrany dia noraisin’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha ny Filoha indianina mivady sy ny delegasiona miaraka amin’izy ireo.
Nandritra izany koa no nisian’ny dinidinika teo amin’ny filoha roa tonta. Nivoitra tamin’izany, ary ny goavana indrindra dia ny fanamafisana ny fiaraha-miasan’ny firenena roa tonta eo amin’ny lafiny ara-toekarena, varotra, fampianarana, ara-tsiasa sy kolontsaina.
Ankoatra ny dinika nifanaovana, niroso tamin’ny fifanaovan-tsoanian’ny fifanaraham-piaraha-miasa eo amin’ny lafiny fiarovana sy eo amin’ny andraikitra an’habakabaka ny roa tonta. Anisan’izany koa ny fametrahana fanamafisana ny fiarovana ny fari-dranomasin’i Madagasikara aty amin’ny faritry ny Oseana Indianina. Niara-niaky ny fanamafisana ny fiaraha-miasa mantsy ny roa tonta eo amin’ny fiarovana sehatry ny harena an-dranomasina sy ny fitantanana izany, sns.Fa nisongadina tamin’izany koa ny fiarahan’ny roa tonta nitaky amin’ny ady atao amin’ny fampihorohoroana, izay notsindrian’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina ny fanohanan’i Madagasikara ny fankatoavana ny fifanarahana ankapobeny mikasika fampihorohoroana iraisam-pirenena (CCIT), izay natolotry ny Repoblikan’i Inde teo anivon’ny Firenena Mikambana.
Ankoatra izay, dia nivoitra tamin’ny dinika nifanaovana teny Iavoloha ihany koa ny mahakasika ny fampitomboana ny mpamatsy vola indianina hampiasa vola eo amin’ny sehatra tsy miankina eto Madagasikara, sns. Etsy andaniny, tsy nohadinoin’ny Filohan’ny Repoblika,Hery Rajaonarimampianina kosa ny nankasitraka ny Filoha indianina, Ram Nath Kovind, tamin’ny nomezany vola mitentina 80,72 tapitrisa Dolara ho an’ny fampandrosoana ny sehatry ny fambolena eto Madagasikara. Teo ihany koa ny nanomezan’ny Repoblikan’i Inde fanampiana, toa ny vary an’arivony taonina sy ireo fitaovam-pitsaboana ho an’ny aretina homamiadana, ary fanafody 100 taonina sy boky fampianarana maro.
Nisy ihany koa ny fanoloran’ny Filoham-pirenena mari-boninahitra Grand-croix de l’Ordre National Malagasy ny Filoha indianina.
Taorian’ny fihaonana teny Iavoloha kosa, dia niara-nitokana ilay fotodrafitrasa goavana Centre d’application géo-informatique pour le développement rural (CGARD) tetsy Nanisana ny Filoha roa tonta. Fotodrafitrasa izay niarahana tamin’ny Repoblikan’i Inde.
Vaovao farany! Nametra-pialana tsy ho filohan’ny vondrona parlemantera HVM ny solombavambahoaka John Elite. Isan’ireo depiote nahavita be teny Atsimondrano ny tenany, raha tsy hiresaka afatsy ny lalana mampitohy Ratsimamanga, izay ny tenany sy ny ankohonany ...Tohiny